ဂေဟဗေဒကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်တီထွင်မှု ၁၀ ​​ခု - Afrikhepri Fondation
photovoltaic စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တာဘိုင်ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဤတီထွင်မှုများသည်အနိုင်နိုင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဆီလီကွန်ဗယ်လီတွင်၎င်းတို့ရှိပြီးသားဖြစ်သည်၊ သုတေသီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်“ စိမ်းလန်းသောနည်းပညာများ” ကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ Rue89 သည်အစိမ်းရောင်တော်လှန်ရေး - Sillicon ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစာအုပ်မှတွေ့ရှိခဲ့သောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုများကိုပြည့်စုံစွာမစစ်ဆေးနိုင်ပါ။ မိုက်ကယ် Ktitareff,7အောက်တိုဘာလ Dunod ပုံပေါ်ဘယ်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်ပင်၎င်းကိုအရင်းအမြစ်မှရယူနိုင်သည်။ Photovoltaics တွင်အထူးပြုထားပြီးဖြစ်သော Solaren သည်လာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာပြားများတပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
စိတ်ကူးသည်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းရှိမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များကိုလှည့်ရန်မဟုတ်ဘဲရေဒီယိုလှိုင်းများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ hemisphere သို့ panel များချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကမ္ဘာမြေဘူတာသည်၎င်းကိုအပူအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက်လျှပ်စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
ရေချွေတာဘို့ nano-sensor များ
ရေယိုစိမ့်ခြင်းသည်ငွေတောင်းခံလွှာများကဲ့သို့ပင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ရန်သူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ရေချိုရင်းမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်သုတေသီများသည်အာရုံခံကိရိယာများကိုတီထွင်နေကြသည်။ မျက်စိဖြင့်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သည့်အပြင်ပိုက်များ၏အလယ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
တုန်ခါမြည်ရန်သူတို့ကိုအထိခိုက်မခံစေသည်သောရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့်အဲဒီအာရုံခံရေစားသုံးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏ terminal ကိုမှထုတ်လွှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယိုစိမ့်မှုအတွက်စံပြ။
ဤရွေ့ကားအာရုံခံကိရိယာသည်နှင့်အညီဖြစ်ကြသည် "စမတ် Grid" (လီတာ, "Smart Grid"), ကွန်ယက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုအသုံးပြုဤ tools များ, လျှပ်စစ်, လမ်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များရှိမရှိ။
"စမတ် Tech" ( "စမတ်နည်းပညာများကို") အဲဒီအာရုံခံကိရိယာ၏ပိုပိုပြီးလမ်းများတစ်လျှောက်တွင် install လုပ်ထားကြသည်ရှိရာကယ်လီဖိုးနီးယားအဝေးပြေး၏လျှောက်လွှာ၏အခြားသောလယ်။ သူတို့ကအခြားအရေတွက် Pass နှင့်ကားအရေအတွက်ကများတို့တွင်အခွင့်ပြုရန်နှင့်အရှင်ဖုံးလွှမ်းဧရိယာပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာတစ်ခုတိကျမှန်ကန်မြေပုံတည်ထောင်ရန်။
ဂြိုလ်တုမှဆက်သွယ်ထားသောကား၏ဒိုင်ခွက်ပေါ်အထူးချပ်ချပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားလျှင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ယာဉ်မောင်းသူအားလမ်းပြပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သေးငယ်သောစွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုံးစွဲသူအလွန်များပြားစေသည်။
Google က: အဆိုပါသတင်းကိုအတော်လေးတစ်ဦးလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေ၏ အပြည့်အဝက၎င်း၏အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖုံးအုပ်ထား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, 2007 ။ သူတစျနေ့က၎င်း၏ ordis ထမြောက်မည်လော S ကငါကုမ္ပဏီ Nanosolar ယုံကြည်ပါတယ် (သို့မဟုတ်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောMiasoléနှင့် Solexant) ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤကုမ္ပဏီများသည် CIGS နည်းပညာ (ကြေးနီ၊ အင်ဒီယမ်၊ ဂယ်လီယမ်နှင့်ဆယ်လီနီယမ်တို့အတွက်) ပစ္စည်း၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့် (အများအားဖြင့် ၁ စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်) ပြားများ၏အထူကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချရန်ကြိုးစားသည် ) ။ နောက်ဆုံးအရာဝတ္ထုသည်စက္ကူထက်ပိုထူမည်မဟုတ်။
အမေရိကန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဒီဂျစ်တယ်အချက်အလက်သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာဆာဗာများ (သို့မဟုတ်“ ဒေတာစင်တာများ) သည်တိုင်းပြည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၁.၅% ကိုစားသုံးသည်။ အကြီးမားဆုံးဖောက်သည် - ကြီးမားသောဂူဂဲလ်သည်ဆာဗာအရေအတွက်သန်းတစ်ဝက်ခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားသည် (ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်) ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဆိုက် pingdom.com ပေါ် မူတည်..
ဤအချက်အချာကျသောနေရာများကဲ့သို့မြို့ကြီးများ၏ဆင်ခြေဖုံးများ၌ဤစင်တာများကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုမည့်အစားဂူးဂဲလ်သည်၎င်းတို့အတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သည့်နေရာများတွင်၎င်း၏နောက်ထပ်ဒေတာစင်တာများကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်” ဟုစာအုပ်ကိုရေးသားသူကဆိုသည်။
လေထုထဲတွင်ပိုလျှံ CO2 ကိုဖမ်းယူဖို့, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသံမြေမှုန့် Climos လွှတ်ပေးရန်သမုဒ္ဒရာတန်ချိန်ပေးထားပါတယ်။ ဤသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များအထူးသဖြင့်ဝါသနာ phytoplanction ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မြှင့်တင်မှုလိမ့်မယ်။
များစွာသောသုတေသီများအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု, Climos ဒီစမ်းသပ်မှုအလတ်စားစကေး (10 000 စတုရန်းမီတာ) လိုသည်။ သို့သော်အဘို့အသူမသည်အဖွဲ့အစည်းမထင်ထားဘူးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်လိုအပ်ပါတယ် ကိုလိုလိုလားလားပေးမပေး
သူမသည် cellulose ဖြစ်လျှင်, အီသနောဤသို့သကြားနှင့်စအီသနော "cellulose" အောင်က "အစိမ်းရောင်" လောင်စာကိုဖွင့်နိုင်သည့်တစ်ဦးပစ္စည်းပါဝင်တဲ့သက်ရှိကိုရှာမျှော်လင့်ပါသည်။ Sandia Lab မှတကယ်အီသနောသို့ကူးပြောင်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စပါးထုတ်လုပ်မှု၏ 15%) များအတွက်ထုတ်လုပ်စီရီရယ်မှအခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များရှာဖွေနေ။
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထို့ကြောင့်စွန့်ပစ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောအကြွင်းအကျန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုစမျးသပျခဲ့သညျ။ ဤအပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသံသရာစဉ်အတွင်းပျက်စီးပြီအဖြစ်ဒါပေမယ့်သူတို့ကအမြဲသူတို့ဘာသာရပ်သောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ ပြောင်းပြန်, အမှုန်ကပ်လျက်မီးတောင်အလွန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီလေ့လာမှုအများအပြားမေးခွန်းထုတ်: မိမိတို့၏သဘာဝသယံဇာတများယာဉ်များသန်းပေါင်းများစွာပါဝါဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်, ငါတို့အကြီးစားမီးတောင်များ၏စစ်ဆင်ရေးခွင့်ပြုကြောင်းယူဆ?
ယင်းပြီးနောက် RFID ရေခဲသေတ္တာ, ဒိန်ချဉ်ခေတ်အခါဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်, ဒီမှာအစိမ်းရောင်ရေခဲသေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ device ကို Seatle အနီးကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ် 2006 ကတည်းကစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပ်မှတဆင့်, အိမ်သူအိမ်သား tools များ (ရေခဲသေတ္တာ, ပန်းကန်ဆေးစက်, မိုက်ခရိုဝေ့ ... ) အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လျှပ်စစ်မီးမီတာ, နှင့်ဆက်နွှယ်နေသော။
အပြိုင်ခုနှစ်, အိမ်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ကို ( ... နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေ,) ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှတဆင့်၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်။ ယခုမူကားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ် မူတည်. အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါရလဒ်: ပိုပြီးကကောင်းတဲ့နှင့်လေထန်င်နှင့်လျော့နည်းလျှပ်စစ်မီးစျေးကြီးသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မြို့သားတို့ကိုထိုမူကွဲအပေါ်အခြေခံပြီးနေ့စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တိုး? ကျွန်မအနည်းငယ်ရေခဲသေတ္တာ၏အပူချိန်ကိုတိုးပွါးလာ။ မေးခွန်းဤဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုစကေးအပေါ်အလားအလာ, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းစွမ်းအင် underperforming များအတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်ပါသည်နေရာများ၌တည်ရှိ၏ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းဆက်လက်ကဗျာ၏ Little က touch နဲ့။ အဆိုပါမူကြမ်း Cool ကမ္ဘာမြေနေရောင်ခြည်, ဆီလီကွန်ဗယ်လီတစ်ဦး startup, မြေမှသည်အကြောင်းကိုတဆယ်မီတာ floating "ပူဖောင်းများခြံ" ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့က, ဟီလီယမ်နှင့်အတူမယ်လို့ဖောင်း coated ရုပ်ရှင် CIGS နှင့်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်နေရောင်ကိုဖမ်းမယ်။
ဒါပေမယ့် start-up ရှိရပ်တန့်မထားဘူး။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာနေရောင်ခြည်အားကောင်းနှင့်ပိုပြီးအဆက်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံးသည်အဘယ်မှာရှိမိုဃ်းတိမ်, တဘက်, အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသောဤပူဖောင်းများကိုပေးပို့ဖို့အဆိုတင်သွင်း။ အဆိုပါဘောလုံးတစ်ခုတည်း cable ကိုအသုံးပြုပုံခြံ၌ရှိသကဲ့သို့, မြေချိတ်ဆက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူကိရိယာကိုခေါ် "လေ Zeppelin"လည်းအွန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Magenn ပါဝါကစမ်းသပ်ပြီးခဲ့။ ဘောလုံးကို rectangular ကြောင်း မှလွဲ. တူညီမူအရ။
သူတို့ကကြယ်ခဲ့ကြသည် Frankfurt Motor Show၎လျှပ်စစ်ကားများသစ်ကိုကစားစရာ Eco-friendly desingénieursဖြစ်ကြသည်။ (အားသွင်းရိုးရိုးယာဉ်ပေါ်တိုက်ရိုက် plug ဖို့လုံလောက်တဲ့ plug မှအဆိုပါပါးပျဉ်းအပေါ် ဒါမှမဟုတ်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. နှစ်ဖက်) ။
(ပြီးသားနီးပါးဆယ်ငါးနှစ်ရှိပါတယ်ထုတ်လုပ်သောမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသစ်သောကဘာလဲPeugeot အထူးသဖြင့်)? တစ်ပိုရှည်ဘက်ထရီသက်တမ်း (ယခုသူမကပျမ်းမျှ 150 ကီလိုမီတာ) နှင့်, ရှိသမျှအထက်နှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘက်ထရီအများကြီးပိုမြန်တစ်နာရီထက်လျော့နည်းအတွက် recharges ။
က Les ဘောငျ ပဲရစ်မြို့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအားသွင်းဖြစ်ကောင်းနောက်ဆုံးတော့အချို့အသုံးပြုမှုဖြစ်လိမ့်မည်: တိုယိုတာဘုံအဝတ်လျှော်စက်များကဲ့သို့အာဏာချိတ်ဆက်နိုင်မယ့် Prius အတွက်ဖြန့်ချိ 2010 ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါထုတ်လုပ်သူလည်းချမှတ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြ လျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုမော်ဒယ်.
အစိမ်းရောင်တော်လှန်ရေး: ဆီလီကွန်ချိုင့်၌စစ်တမ်း de မိုက်ကယ် Ktitareff - ed ။ Dunod - 224p ။ - 17 € - အဆိုပါ7အောက်တိုဘာလလွှတ်လိုက်ပါ။
SOURCE မှ: http://rue89.nouvelobs.com/-119068
ပါဝါ ၄၈ ခု - Robert Green Power (အသံ)
Yanga, America မှာကျွန်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်လာပထမဦးဆုံးလူမည်း
အယူအဆ - Rudolf Steiner (PDF)